Arsenal iyo Manchester City oo Guulo wada gaaray: Dagaalka Top oo wali taagan | TOP NEWS
Arsenal iyo Manchester City oo Guulo wada gaaray: Dagaalka Top oo wali taagan
Laba gool oo uu dhaliyay Alexis Sanchez ayaa ka saaciday Arsenal iney guul ku gaarto Emirates Stadium isla markaana si meel dheer ah u nooleysay rajadeeda afarta sare si ay xili ciyaareedka soo aadan uga soo muuqdaan Champions League.
Labada gool ee Sanchez uu dhaliyay waxey ka saaciday inuu kaalinta labaad kasoo istaagokala sareynta gooldhalinta horyaalka Premier League isagoo hal ka sareeya Kane sidoo kalana hal ka hooseeya Lukaku.
Qeybtii labaad markii la isku soo laabtay Arsenal ayaa si weyn u dadaashay balse Alexis Sanchez ayaa bilaabay bandhigga goolasha daqiiqadii 72-aad markaas oo uu caawinaad ka helay Mesut Ozil.
Alexis Sanchez ayaa mar kale shabaqa gaaray markii uu madaxeeyay kubad laga soo badbaadiyay Olivier Giroud daqiiqadii 81-aad.
Arsenal waxey leedahay 72-dhibcood, halka Liverpool ay leedahay 73-dhibcood, waxaana afarta sare lagu kala bixi doonaa maalinta ugu dambeysa.
Dhinaca kale Sadex gool oo ay kala dhaliyeen Gabriel Jesus, Kevin de Bruyne & Yaya Toure ayaa guul muhiim ah siisay Manchester City iyadoo goolka calanka Baggies ay ka heshay Robson-Kanu, balse guusha ay gaartay Citizens waxey ka saaciday iney gaarto booska sadexaad.
Waxey aheyd guul muhiim ah, waana guushii labaad oo xiriir ah oo ay gaaran isbuucaan gudahiisa madama ay Leicester City isla garoonkoda ku dileen ciyaar dhib badneyd.
Si kastaba Manchester City ayaa guul weyn ka gaartay West Brom waxeyna natiijadaan ka saaciday iney booska sadexaad soo istaagto iyadoo booska kala baxday Liverpool waxeyna leedahay 75-dhibcood.
Arsenal iyo Manchester City oo Guulo wada gaaray: Dagaalka Top oo wali taagan added by Mohamed Abdulle Hassan on May 17, 2017